Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေရှာနေပါသလား? - WebsiteDesign.com.mm
Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေရှာနေပါသလား?
6:53pm on Sunday 17th February 2019
Image တွေဟာ Content Marketing ရဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်ဆို လဲမမှားပါဘူး။ Imageတွေဟာကျွန်တော်တို့ Post တွေကို Social Media Newfeeds တွေမှာလူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းရရှိစေရန် အများကြီးကူညီပေးနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာပုံ တစ်ပုံပြုလုပ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သူ၊ ပုံပြုပြင်ရန်အခက်အခဲရှိသူဖြစ်နေပါက ပုံတွေကို Download လုပ်နိုင်တဲ့ Website တွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Website တွေက အခမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက် ဈေးကြီးကောင်းကြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အမိုက်စားပုံတွေကိုလည်း အလကား Download လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင် Free Stock Photo တွေရနိုင်မယ် Website တွေကိုဖော်ပြပေးသွား မှဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီ Website လေးမှာဆိုရင် ကိုလိုချင်တဲ့ Category ကိုရှာပြီး ရွေးချယ်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီပုံလေးတွေက ဝါသနာရှင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေက တင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ Image ရှာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေ အတွက်တင်ပေးထားကျတာပါ၊ ကိုယ်ကလည်းတင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Free Join ဆိုတဲ့ Button မှာ အကောင့်ဝင်ပြီး Image တွေတင်ပေး လို့ရပါတယ်။ Account ပြုလုပ်နည်းကလဲ Facebook, Gmail တို့နဲ့ Free ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရတာလဲအဆင်ပြေတဲ့ Website လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Website လေးကလဲ Image အမိုက်စားလေးတွေကို Free Download လုပ်နိုင်မယ့် Website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Website မှာက Free လဲ Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အဲ့ဒီထက်ပိုလန်း ပိုမိုက်တဲ့ Image တွေကို ရချင်တယ်ဆိုရင် Premium Membership ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Image တွေကလဲ Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေဖြစ်ပြီး Category တွေလဲစုံစုံလင်လင်ရှိ တဲ့ အတွက်ကြောင့် User တွေစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီ Website ကတော့ Creative Image ပေါင်း ၃၅၀ဝ၀ ကျော်ကို Commercially ယူသုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Category တွေလဲစုံစုံလင်လင် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် User တွေစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ Website တွေမှာ သင်လိုအပ်တဲ့ Image တွေကိုရှာဖွေပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။